Aasiya: Tahriib waxay ahayd qaladkii nolosheeda
Tahriib waxay ahayd qaladkii nolosheeda
"Tahriibiyeyaashu wuxuu qaatay lacagteenna, laakiin waqtigeena wuu lumiyey. Wuxuu noo sheegay in aan sugno, ilaa iyo habeenki ugu dambeeyay, markii uu yiri waxaa jira dad aadaya Liibiya oo isagana wuu noo soo diri doonaa hadaan rabno inaan aado Yurub. ”
Aasiya waxay ogaatay in tahriibiyeyaashu ay rabeen inay geeyaan Liibiya maxaa yeelay wuxuu qaadhan doonaa lacag badan oo ay ugu siyaan halkaas marka loo eego Masar. Waxay la xiriirtay eedo Khartoum oo heshay nin kale oo tahriibiya. Waxay safreen Khartoum. Aad bay u adkeyd. Waxay noqotaay inay joogaan dhowr meelood oo dhuumasho ah in ka badan hal bil. Safaar aad u xun bay aheeyd.
"Waan baqnay. Waxaan xirnaa albaabka mana seexan karnay habeenkii cabsi darteed. Waxaan seexan lahayn dhowr saacadood ka dibna waan toosinnaa. Ma helin hurdo kugu filan oo waxaan haysano cunto. Aniguna sidoo kale waan hunqaaday. Cudurka Malaria ee aan ku qaadey Juba waxay noqotay mid xanuun badan markii aan gaarnay Suudaan. ”
Mid ka mid ah meelaha lagu dhuunto, ninka leh guriga ayaa isku dayay inuu ka faa'iidaysto Aasiya, laakiin way iska caabisay, waxayna ku guuleysteen inay sii wadaan safarka. Khartoum, edaadheed ayaa ka caawisay sidii ay ku heli lahayd tahriib kale waxayna u aaday Masar, laakiin iyada iyo kooxdeeda waxaa qabtay boolis waxayna ku noqdeen Khartoum. Isku daygii labaad ayaa lagu guuleystay, Aasiyana waxay gaari ku raacday buuraha ku teedsan xadka u dhexeeya Suudaan iyo Masar. Waxay ku qasbeen inay buuraha lug kaga tallaabaan halka Aasiyana waay ku daali jirtay.
"Waxaan ku daale buurta, aan ku dhacay. Waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyay ee safka safka mara. Waxaan dhaawacmay markii aan dhacay."
Toddobaad kadib waxay timid Qaahira iyadoo rajaynaysa inay doon ku sii waddo Yurub, laakiin waxay ogaatay in dawladdu xidhay wadadii tahriibka. Haalkan ay ku nooshahay Qaahira iyadoo haysata gabadheeda yar waxayna dareentaa in nolosheeda ay khasaartay. Waxay u sheegeysaa qof walba oo weydiinaya talooyinkeeda ku aaddan Masar tahriibiyaasha inaysan u qalmin dhiibtada.